Inguva refu-dhipoziti yakakosha here? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yezvigadzirwa zvekuchengetedza par kugona ndeye yakatarwa-temu bhangi dhipoziti. Asi ivo vanopesana navo panguva ino yavo yakaderera purofiti. Nechido chekuchengetedza kwete kupfuura 1%, kunyangwe isingabhadharwe kubva kumakomisheni uye nezvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kana kugadzirisa. Iko imwe yemazano ekuvandudza kudzoka kwako kunoenderana nekugadzwa kwezvimisikidzo zvinotungamirwa kwenguva refu izvo zvinoita kuti uve nemari isingakwanise kwemwedzi yakawanda, pamwe yakawandisa kune vazhinji vanochengetedza.
Mune chero zviitiko zvacho, iyi kirasi yezvigadzirwa zvekuchengetedza inogona kubvumidzwa kwenguva yakareba iri pakati pemakore matatu neatanhatu, umo mari inowedzera nechishuwo inogona kusarudzwa, kurongedzwa kana kuratidzwa kune index index, ine capital capital yepakati 1.000 na10.000 ma euro, iri pamusoro peiyo yezvimwe zvigadzirwa zvekudzikisira pazasi mazwi. Mune zvimwe zviitiko, iine mukana wechokwadi wekudzima pamberi apo kunze kwekunge varangwa nemakomisheni anogona kusvika kusvika ku3%.
Fomula yakajairika kushambadza iyi mhando yezvigadzirwa zvemari ndeyekushandisa zvido zvinowedzera, mune izvo sezvo mazwi ari akareba iyo purofiti inova inokwezva, kunyangwe muzvikamu zvisina kunyanya kushamisa zvido zvemunhu anenge achinyorera, angangoita 3%. Kupi hapana mafomati matsva semamwe makirasi epfupi term anoisa mukugara kwavo. Uye mune zvese zviitiko ichafanirwa kubvisirwa kubva kune purofiti inopihwa neizvi zvigadzirwa zvekuchengetedza wega.
1 Yenguva refu-dhipoziti: kukwidziridzwa
2 Mitemo yekugara
3 Kufambira mberi purofiti
4 Mabhangi anopa
5 Akachengetedzeka Dhipatimendi Maakaundi
Yenguva refu-dhipoziti: kukwidziridzwa
Mune marefu-madhipoziti, hapana kukwidziridzwa kana kupihwa kupihwa kunotarisisa zvakanyanya kune vashandisi vebhengi, kunyangwe zvakadaro, mitengo yemubhadharo yakaderera haina kukwirira zvakanyanya Iko, muzviitiko zvakawanda, iro rese capital rakaiswa rinovimbiswa, rinova chengetedzo pamwe nevaponesi munguva dzino dzinonetsa. Asi zvakadaro, izvi hazvisi izvo zvinoitika mukirasi ino yezvigadzirwa zvebhengi. Kana zvisiri, pane kudaro, idzo nzira chaidzo yakaiswa nenzvimbo dzechikwereti kutora mari yevatengi. Kupa zvirinani mamiriro ekuhaya kwavo kuburikidza neiri nani purofiti iyo inogadzirwa nemashoma gumi egumi mumubhadharo.
Ichiri kune rimwe divi, inofanirwa kuratidzwa kuti ichi chigadzirwa mukusimudzira hachigone kuvandudzwa nevabati vacho. Mune mamwe mazwi, hapana mukana wekuenderera neaya marimendi ekumisikidza akaiswa patiri nevakuru vezvikwereti masangano anoona nezvekushambadzira kwavo. Nechibereko chekuda chinowanzo svetuka pakati pe 1,50% uye 2,50%, uye pasina mukana wekudzima pamberi. Pazvinenge zvichidikanwa kuti uongorore kana kuita kwayo kuri nyore kubva izvozvi zvichienda mberi.
Imwe yehunhu hwemabhangi aya ndeyekuti mazwi avo akakwirira kwazvo uye vanofamba mune imwe nhanho inoenda ichibva Mwedzi 24 kusvika 56. Mune mamwe mazwi, zvinotora nguva yakareba kuti isu tibate chikamu chedu chemari yedu kusiyana nemitero yechinyakare kana yakajairwa. Kubva pane ino maonero, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo vakachengeterwa rakanyatso tsanangurwa chimiro iro rinomiririrwa nevashoma vane hasha savers. Kunge chokwadi chekuti ndechimwe chezvinhu zvakagara-kureba zvigadzirwa zvatinogona kubvumirana panguva ino uye mune chero mamiriro ezvinhu zvakafanana pachinhu ichi nemari yekudyara.
Chimwe chinhu chatinofanira kuongorora nemadhipatimendi eaya maitiro inyaya yekuti anogona kuve akaomeswa pamhepo. Saka kuti nenzira iyi, isu tiri muchinzvimbo chekuvandudza purofiti nezvishoma zvegumi muzana muzana poindi uye semubatsiri kune ichi chinopihwa chemunhu kuchengetedza. Kusvika padanho rekupedzisira iro 1% chipingamupinyi chinogona kukurirwa nekumwe kukwana kubva padiki mari kubva ku1.000 euros pachibvumirano. Nepo kune rimwe divi, online kondirakiti inobvumira kuenzanisa kuri nani pakati pekugadziriswa kweaya maitiro. Nenyaradzo huru kubva kumba kana kumwe kuenda uye chero nguva yezuva, kunyangwe husiku kana pakupera kwevhiki.
Kufambira mberi purofiti
Kana marefu-dhipoziti akaratidzirwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti mubairo wavo wakavakirwa pamatemu akasarudzwa. Sezvo aya akareba, inokwidza chimbadzo chinoshandiswa nemasangano echikwereti uye zvishoma nezvishoma kusvika panguva dzakakwirira dzekugara. Pane mamwe matanho anoenda kubva 0,1% kusvika 0,5% zvinenge uye izvo zvinogona kuve mafirita ekusarudza izvi zvigadzirwa zvekuchengetedza. Zvekuti pakupera kwezuva isu tinokwanisa kupfuudza ekutanga epakati pekumiririra, chinova chimwe chezvinangwa zvedu zvakakosha zvakanyanya.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti kwenguva refu-dhipoziti haifi yakazowana inoshamisa inodzoka. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vari kufambawo pamwero wakadzikama wemubhadharo semhedzisiro yemutengo unodhura wemari. Izvo hazvigone kukanganwika kuti izvi pari zvino zviri pa0% uye kuti ndiyo inokonzeresa kwenguva-refu dhipoziti kuti irege kuve inobatsira sevazhinji vadiki nepakati-saizi saizi vanotarisira kubva kukirasi ino yezvigadzirwa zvemabhengi. Mukuenderana neiyo yemamwe mamodheru ane hunhu hwakafanana, sezvazvinogona kuonekwa panguva ino kuburikidza neyezvino kubhengi kupihwa.
Kiredhiti masangano haana kuregeredza ichi kupihwa uye yatanga danho rakakura pane refu-refu dhipoziti. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti idzi hadzifadzi kupfuura nakare uye nekuvandudza kwavo kushoma uye kushoma. Iko kwavari vasipo mune chero eaya mamiriro, iyo zvinongedzo kune zvimwe zvinhu zvemari, kazhinji ichibva kumisika yemari uye kunyanya kubva pasarudzo dzemusika wemasheya. Kune rimwe divi, mune imwe yezviitiko, marefu-maisipo anosvika kumigumo yemamwe marongero anga achishandisa aya emhando dzekudyara.
Zvakare zvakanyanya kukosha inyaya yekuti marefu-marefu dhipoziti haana kuitirwa kuchengetedza ese akachengetwa akaunganidzwa nevashandisi. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kufanoona mari dzichafanirwa kutarisiswa mumwedzi mishoma inotevera kana makore. Zvekubhadharwa kwemabhiri epamba, mitero inosungirwa kana kunyangwe kubhadharwa kwechikoro chevana vadiki. Chero zvazvingaitika, hapazove nesarudzo kunze kwekuongorora kuti ndeipi bhajeti yatiinayo kubva zvino kuratidza mari iyo yatinofanira kugovera kune marefu-dhipoziti.
Saizvozvo, zvakare zvine basa kuti nguva idzi dhipoziti dzinoumba nzira yekugadzira yakagadzikana mari yekuchinjana kwepakati uye kunyanya kwenguva refu. Iko vashandisi vanokwanisa kuchengetedza mari yavo uye kuwana diki diki kubva kune aya mafambiro emari. Kufanana nekushomeka kwayo kushoma kuenderana nemhando nyowani mukushambadzira kwayo uye nekusiya fomati inozivikanwa nekumira zvakanyanya kubva kwakasiyana maonero evashandisi. Iko hakuna kushamiswa kweizvi mune avo mamiriro mune kunyoreswa uye izvi zvinoita kuti zvinyatso fungidzira kune vese saver munyika medu. Kuti usvike pamhedzisiro yekuti inogona kunge isingakoshese kumisikidzwa kwayo nekuda kweiyo equation iyo yainopa pakati pekubatsira kwayo uye nenguva iyo mari yacho inofanira kumiswa kusvikira yakura.
Akachengetedzeka Dhipatimendi Maakaundi
Rudzi urwu rwechigadzirwa chemari rwakasiyana zvachose nekuti runogona kunyoreswa kubva pamari yepasi pamwedzi iyo inodhura kwazvo kumhuri, kutenderedza zana euros angangoita. Uye nemari yepakati kana yakareba-yakareba inogadzirwa inobvumira muridzi wayo kuunganidza mari yeramangwana pamwe nechimbadzo chainogadzira. Naizvozvo musanganiswa pakati peakaundi uye dhipoziti mune yechinyakare pfungwa, saka zita rayo, iro rine hushoma hurefu hwe makore mashanu, kunyangwe kana pane chero mamiriro ezvinhu muridzi anoda kuve nemari yakachengetwa, iye anogona kuita kuregererwa kwakakwana kana kusarudzika mushure memwedzi mitanhatu kubva pakubatira.
Iyo zvakare ine vimbiso yekuti iwe uchagara uchidzoreredza, zvirinani, 100% yemari yakapihwa muinvestment yakaitwa, iyo inowedzera chengetedzo pamwe mukuita kwako. Inogadzirwa seimwe yenzira dzakajeka pane kudyara kwetsika mumabhangi emabhangi-akasarudzika, kunyangwe iri pasi pemamiriro ezvinhu akasiyana. Kuva chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa nevashandisi vemasheya panguva ino. Nebudiriro iyo, semamwe zvigadzirwa zvemari, haina kukwezva zvakanyanya kune zvido zvevanhu. Mupfungwa iyi, haigone kukanganwika kuti mutengo wemari parizvino uri pa0%, pane yakaderera nhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inguva refu-dhipoziti yakakosha here?
Ndeipi kadhi yakanyatsokodzera nzira yako yekushandisa?